password မေ့တတ်သူများအတွက် window ရဲ့ admin password ကိုဘယ်လို ပြန်ဖျက်မလဲ - MYSTERY ZILLION
password မေ့တတ်သူများအတွက် window ရဲ့ admin password ကိုဘယ်လို ပြန်ဖျက်မလဲ
http://trinityhome.org ဆိုက်ကနေ Trinity Rescue Kit ကို Download လုပ်ယူလိုက်ပါ
Download ပြီးလို့ iso ဖိုင်ရလာပြီဆိုရင် အဲ့ဒါကို bootable disk ဖြစ်အောင် iso burner (http://www.nyinaymin.com/2009/11/iso-ultraiso-premium-edition-935.html) ဒါမှမဟုတ် Nero (http://www.nyinaymin.com/2010/02/nero-lite-v94260-edition.html) တစ်ခုခုနှင့် အခွေ burn လိုက်ပါ . (Nero express ရှိတယ်ဆိုရင် iso ဖိုင်ကို Double click နှိပ်တာနဲ့ Burn ဖို့အတွက် အဆင့်ကို တန်းရောက်သွားမှာပါ)
ရတာတဲ့ အခွေကို CD room ထဲထည့်လိုက်ပါ ... မထည့်ချင် BIOS ထဲ၀င်ပြီးတော့ 1st boot device ကို CD Room တော့ထားပေးဖို့လိုပါတယ် .
ပြီးတာနဲ့ စက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ . ရွေးခိုင်းတဲ့အဆင့် ရောက်လာပြီ ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက Option ကိုရွေးပေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ
15 မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ ဆက်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကျရင် winpass လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ .
အဲ့ဒါပြီးရင် မိမိရဲ့ HDD ကိုရွေးဖို့အတွက် 1 လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ .
ပြီးရင် admin password ကို ဖျက်ဖို့အတွက် 1 ကို တစ်ခါထပ်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပါ
ပြီးရင် Y လို့ ရိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်ပါ .
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် reboot လို့ရိုက်ပြီးတော့ . enter ခေါက်လိုက်ပါ . ရိုက်ပြီးတာနဲ့ CD အခွေအပြင်ကို ထွက်လာပါလိမ့်မယ် . ပြီးတာနဲ့ စက်က restart ဖြစ်သွားပြီးတော့ window loading ပေါ်လာပြီးတော့ ယခင်က ပေးထားတဲ့ admin password က ပျက်သွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
copy from www.nyinayminn.com
ဂလိုဆို..window သုံးတဲ့သူတွေစက်ကို password ထားယုံနဲ့စိတ်မချရတဲ့သဘောလားအစ်ကို...
mgponemyintnaing wrote: »
မှန်ပါသည်။ vista နဲ့7 ကတော့မစမ်းဖူးဘူးပါ။ konboot ဆိုတာလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ အခုဆို konboot က vista ရော7ပါရတယ်လို ့ကြေညာထားပါတယ်။
Hiren's BootCD ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် .. အဲဒါလည်း vista ကော7ပါရတယ် ... vista နဲ ့XP မှာတော့စမ်းဖူးတယ် ..7မှာတော့မစမ်းဖူးဘူး ...
သူရေးထားကတည်းက ရှင်းပါတယ်အစ်ကို.. Password မေ့တတ်သူများအတွက် လို့ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
Software ဆိုတာ သုံးတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကွဲတာပါ။ အကုန်လုံးအသုံး၀င်တာကြီးပါပဲ။ :redface::redface:
Hiren's Boot CD နဲ့Windows Password Remover နဲ့Windows အကုန်လုံးမှာ သုံးလို ့ရပါတယ်..